Ukudliselwa ngozakwabo ebholeni kwafaka uMthembu kwezokusubatha - Impempe
Ukudliselwa ngozakwabo ebholeni kwafaka uMthembu kwezokusubatha
March 31, 2021 March 31, 2021 Impempe.com
Njengabo bonke abafana abakhulele emakhaya, umdlalo wokuqala akwazi ukuzibandakanya kuwo uBongumusa Mthembu yobhola. UMthembu Ukhulele emakhaya eBulwer maphakathi neKwaZulu-Natal kanti usetshele Impempe ukuthi kwenzeka kanjani agcine eliyekile ibhola, agxile ekugijimeni.
“Ngalidlala impela ibhola, kodwa ngesino sokuba semakhaya ngabona ukuthi amathuba okuphumelela ngalo mancane kakhulu,” kusho uMthembu. “Ngabe sengiba nesifiso sokwenza umdlalo okuzoba ngowami ngedwa ngoba nganginakho ukuzimisela kusukela ngisemncane.
“Ngabe sengingena ekugijimeni ngoba ngabona ukuthi wumdlalo odinga mina ngingedwa. Akudingeki ube nozakwenu abazobuye bengafaki amandla ngale ndlela ofisa ngayo.
“Ekugijimeni uma ngifikelwa isifiso sokuyojima ngiyakwenza lokho ngaphandle kokudinga omunye umuntu,” kucha le nsizwa baseBathenjini.
Useneminyaka engaphezu kuka-15 egijima kanti uthi yize kungasheshanga kwakhanya, kodwa wayengakaze azingabaze noma acabange ngokushiya phansi.
“Akungoba kungisebenzele zisuka, ukuqala ukubona kwenzeka izinto kube ngemuva kweminyaka eyishumi ngigijima. Ngangingakaze ngikubheke ngeso lokuthi mhlawumbe ngeke nje isebenze lento. Ngaqhubeka nje ngokuzikhandla ngoba vele ayikho into engangiyibhekile ngokugijima kwami.
“Ngazitshela ukuthi yonke into inesikhathi sayo, okungenzekanga kulo nyaka kusho ukuthi isikhathi sakho besingakafiki,” kubeka yena.
Ukumiswa kweComrades Marathon, aseyinqobe kwaze kwaba kathathu, kumphazamisile ezinhlelweni zakhe zokuqopha izikhathi esingcono kodwa uyasiqonda isimo esiphoqe lokhu.
“Kube buhlungu kakhulu ngesikhathi imiswa okokuqala ngo-2020, kodwa kulo nyaka ngigcine ngingasazi noma ngiphatheke kabi noma kwenzekani. Kubuhlungu khona ukuthi into obuyenza unyaka nonyaka iminyaka engu-15, uzwe kuthiwa ayisezukwenzeka.
“Kulo nyaka besilindele ukuthi kukhona abaphathi balo mjaho abangakwenza ukuze iqhubeke. Bengingalindele ukuthi kungathiwa ayikho nje ngampela. Kodwa ke, kumele sikuhloniphe lokhu osekwenzekile ngoba nathi siyabona ukuthi iCovid idla lubi.”
Intshisekelo ayikapheli kuMthembu njengoba esenezinto eziningi asafisa ukuzizuza okubalwa kuzo nokuwina imijaho emikhulu emhlabeni jikelele.
“Kusekuningi kakhulu engifuna ukukuzuza ngoba okuhle wukuthi siyabona ukuthi ezokusubatha ziyakhula impela. Ngisafuna ukuqhubeka ngiyiwine iComrades, kunabantu asebayiwina amahkandla angaphezu kweyisikhombisa. Nami ngingajabula ukukwenza lokho. Nokuqopha izikhathi ezintsha esingcono yikho osekusele manje,” kusho yena.
Eminye imidlalo, Ezokusubatha
Previous Previous post: Izophindiselela iBafana iSundowns eSudan
Next Next post: EZINGENA MANJE: Seluhlome ngoQalinge Usuthu